दीपाश्री नीरौलाको नजरमा पढ्नैपर्ने ३ पुस्तक « Mero LifeStyle
दीपाश्री नीरौलाको नजरमा पढ्नैपर्ने ३ पुस्तक
मेरो लाइफस्टाइल	|| 1 May, 2021
अहिले कोरोना माहामारीले गर्दा २ हप्ताको लागि सरकारले निषेधाज्ञा गरेको छ । घरमा बसेर कसरी समय बिताउने भन्ने चिन्तामा हुनुहुन्छ भने पुस्तक पढेर पनि समयको सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ । तर यो खालि समयमा कस्तो पुस्तक पढेर सदुपयोग गर्ने त ? वा कस्ता पुस्तक छान्दा राम्रो हुन्छ ? भन्ने किसिमको द्विविधामा हुनुहुन्छ भने, तपाईले यी तीन पुस्तक पढेर समयको सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
अभिनेत्री तथा निर्देशक दिपाश्री निरौलाको नजरमा पढ्नै पर्ने ३ पुस्तक
मैले पढेका पुस्तकहरुमा तीन पुस्तक छान्नुपर्दा पहिलो नम्बरमा श्रीमद्भगवतगीता पर्छ । यो पुस्तक पढेर मैले जीवन दर्शन के हो यसलाई कसरी सरल बनाउने भन्ने कुरा बुझेको छु । यसमा जीवन के हो भन्नेबारे बुझ्न सकिन्छ । व्यवहार, जीवन र कर्म कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा यसमा देखाइएको छ । सारा जीवनका लागि चाहिने कुराहरू यसमा छन् । त्यसैले पनि यो पुस्तक सबैले एकपटक पढ्नैपर्छ ।
२. चिना हराएको मान्छे
दोस्रो नम्बरमा हरिवंश आचार्यको ‘चिना हराएको मान्छे’ पनि मलाई एकदमै मन परेको पुस्तक हो । हरिवंश आचार्य नाम नै एउटा महत्वपूर्ण परिचय हो । अभिनय गरेर अरुलाई पेट मिचिमिचि हसाउने र धुरुधुरु रुहाउन पनि सक्ने यी महान् कलाकार आफ्नो वास्तविक जीवनमा कति हासेका छन् र कति रोएका छन् त ? यस्ता अनेक प्रसङ्गहरुको बेलिबिस्तार चिना हराएको मान्छे पुस्तकमा छ । मान्छेको जीवनमा आईपर्ने उत्तारचढावलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा यो पुस्तकबाट सिक्न सकिन्छ ।
विजय कुमार पाण्डेको ‘खुशी’ले मदन पुरस्कार समेत जितेको छ । यस आत्मकथा पढ्दा साच्चै नै खुशी प्राप्त हुन्छ । पढुन्जेल रमाइलो लाग्ने यो कितावमा लेखकले बिषयवस्तुहरु टाकटुक मिलाएर राखेका छन् । आफ्नो व्यवसायिक जीवनमा पत्रकार , प्रस्तोता , सम्पादकको भूमिकामा भएका उतार चडावको कथा यस पुस्तकमा छ । भौतीक सुखले मात्र जीवन पूरा हुँदैन भन्ने कुरा यस पुस्तकले सिकाउँछ ।